Safraya? Hubso inaad tan marka hore akhrisid! | Faahfaahinta Wararka Degmada
Safraya? Hubso inaad tan marka hore akhrisid!
Intii lagu gudajiray cudurka safka ah ee COVID-19, waxaa suuragal ah inaad lakulanto viruska markaad safraysid. CDC-du waxay ku talineysaa qof kasta oo safraya inuu taxaddar muujiyo - iska ilaaliyo dadka badan, xiro maaskaro, gacmaha si joogto ah u dhaqo - oo uu xaddido howlaha aan muhiimka ahayn marka uu ku laabanayo gurigiisa.
Ku noqoshada shaqada iyo iskuulka, dabcan waa waxqabad lama huraan ah. Taasi waxay tiri, waxaan kaa codsaneynaa inaad isticmaasho daryeel dheeri ah si looga caawiyo inaad ilaaliso asxaabtaada / asxaabtaada fasalka iyo kuwa kaleba.
Haddii aad xanuun dareento, guriga joog. Raadi calaamadaha COVID-19 oo qaado heerkulkaaga kahor imaatinka dugsiga.
CDC waxay kaloo kugula talineysaa waxyaabaha soo socda dadka dhowaan safray:
Tixgeli in lagugu tijaabiyo fayraska 3-5 maalmood kadib safarkaaga isla markaana yaree waxqabadyada aan muhiimka ahayn 7 maalmood oo buuxa safarkaaga ka dib, xitaa haddii baaritaankaagu uu xun yahay. Haddii aadan isbaarin, tixgeli inaad yareyso howlaha aan muhiimka aheyn 10 maalmood.
Haddii baaritaankaagu fiicnaado, gooni isu sooc si aad uga ilaaliso dadka kale inay cudurka qaadaan.
Sidoo kale qaado talaabooyinkan 14 maalmood ka dib markaad ka soo laabato safarka si aad uga ilaaliso dadka kale inay qaadaan COVID-19:
Ka fogow ugu yaraan 6 fuudh qof kasta oo aan ku soo raacin, gaar ahaan meelaha ay dadku ku badan yihiin. Waa muhiim in tan lagu sameeyo meel walba - gudaha iyo dibaddaba.
Xidho maaskaro si aad u daboosho sankaaga iyo afkaaga marka aad ku sugan tahay meelaha la wadaago ee ka baxsan gurigaaga, oo ay ku jiraan markaad isticmaaleyso gaadiidka dadweynaha .
Haddii ay jiraan dad reerka ah oo aan kula soo safrin, maaskaro xir oo weydii qof kasta oo reerka ka tirsan inuu xirto waji-furka meelaha la wadaago ee gurigaaga.
Dhaq gacmahaaga badanaa ama isticmaal gacmo nadiifiye ugu yaraan 60% aalkolo ah.
Ka fogow inaad la joogto dadka halista ugu jira cudur daran .
Raac dhammaan talooyinka gobolka ama deegaanka ama shuruudaha safarka ka dib.
Safarka caalamiga ah, raac tilmaamaha federaalka. Booqo Waaxda Arimaha Dibada ee Mareykanka: Safarka iyo CDC: Talooyinka Safarka ee COVID-19 ee ku socdaalaya meesha loogu talagalay wixii macluumaad dheeraad ah.